Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီးေစ်းႏႈန္းမ်ား - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
Home > နည္းပညာဗဟုသုတ > Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) 7:16 PM နည္းပညာဗဟုသုတ
Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား ႏွင့္
1.British Thermal Unit (Btu)
Air Con တစ္လံုးရဲ ႔ ေအးႏိုင္စြမ္းကို Btu နဲ႔ တိုင္းတာပါတယ္။
Btu မ်ားလာတဲ့အေလ်ာက္ သူ႔ရဲ႕ေစ်းႏွဳန္းကလဲလိုက္ျပီး မ်ားလာမွာပါ။
အမ်ားစု သိထားျကတယ့္ horsepower(hp) ျမင္းေကာင္ေရအား က တကယ္တမ္းေတာ့ အေရးမပါပါဘူး။
Horsepower (hp) က အေအးႏွဳန္းကို တိုင္းတဲ့ unit မဟုတ္ပါဘူး ။
Horsepower(hp) ဘယ္နေကာင္ရွိတဲ့ Air Con မွာ Btu ဘယ္ေလာက္ထြက္လဲဆိုတာ Brand အလိုက္ Model အလိုက္ သတ္မွတ္ပံု ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။
မိမိအခန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Btu ကို "အၾကမ္းဖ်င္း"တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
မိမိ သံုးမယ့္အခန္းရဲ႕ အလ်ား x အနံ square feet ကို 35 နဲ႔ ေျမွာက္ပါ။ ရလာတဲ့အေျဖက မိမိ အခန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Btu ပါပဲ။
ဥပမာ 12 ေပx 15 ေပ အခန္းဆိုရင္ square feet က 180 ပါ။ 180 x 35 = 6300 Btu လိုအပ္ပါတယ္။
အခန္းထဲမွာ လူ ၁ ေယာက္ထပ္ ပိုေနမယ္ဆိုရင္ အခန္းဧရိယာအတြက္ တြက္ထားတဲ့ Btu အျပင္ လူတစ္ဦးအတြက္ကို 600 Btu စီ ထပ္ေပါင္းေပးပါ။
Toshiba ၁ေကာင္မွာ 8500Btu ၊ ၁ေကာင္ခြဲမွာ 11600Btu ၊၂ေကာင္မွာ 16400Btu ၊ ၃ေကာင္မွာ 21900Btu အပူဖလွယ္ႏိုင္ပါတယ္။
Inverter type ေတြမွာဆို EER 12 ကေန15 ဝန္းက်င္ ရွိၾကပါတယ္။
Toshiba ၁ေကာင္မွာ10.12 EER ၊ ၁ေကာင္ခြဲမွာ 9.35 EER ၊၂ေကာင္မွာ 9.11 EER ၊ ၃ေကာင္မွာ 10.5 EER ရွိပါတယ္။
အတြင္း unit က ထြက္တဲ့ ေလထြက္နွဳန္း ကို cubic meter per hour (m³/h) နဲ႔ တိုင္းတာပါတယ္။ ေလထြက္ႏွဳန္းမ်ားေလ အေအးျမန္ေလပါ။
Toshiba ၁ေကာင္ air con မွာ 540m³/h
Toshiba ၁ေကာင္ခြဲ air con မွာ 600m³/h
Toshiba ၂ေကာင္ air con မွာ 900m³/h
Toshiba ၃ေကာင္ air con မွာ 1100m³/h ထြက္ရွိပါတယ္။
ဆူညံမွဳဆိုတဲ့ေနရာမွာ split type မွာဆိုရင္ အတြင္း unit နဲ႔ အျပင္ unit ရဲ႔ ဆူညံမွဳဆိုျပီး ၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။
အတြင္း unit ရဲ႕ ပန္ကာက ေတာ္ေတာ္ဆူညံေနတယ္ဆိုရင္ သင္ညအိပ္ရင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနမွာပါ။
အျပင္ unit ကလည္း ျပတင္းေပါက္နဲ႔ နီးျပီး အသံက်ယ္ေနမယ္ဆိုရင္ အတြင္းကပင္ ဆူညံသံကို ၾကားေနရႏိုင္ပါတယ္။
ဆူညံမႈကို decibel (dB) နဲ႔ တိုင္းတာပါတယ္။ dB နည္းေလ အသံတိုးေလပါ။
5. Copper Pipe Quality
6. ေၾကးပိုက္ ေဖာ့စြပ္
Outdoor နဲ႔ Indoor unit ကို ဆက္ေပးတဲ့ ေၾကးပိုက္ကို စြပ္တဲ့ ေဖာ့စြပ္က original စြပ္ျပီးသားမွ အေအးလံုမွာပါ။ ပိုက္သပ္သပ္၀ယ္ ေဖာ့စြပ္ သပ္သပ္၀ယ္ျပီး ေဖာ့စြပ္ကို ထက္ျခမ္းအလ်ားလိုက္ အစဆံုး လွီးျပီးမွ ေဖာ့စြပ္ထဲ ေၾကးပိုက္ ထည့္တာက အေအးဓာတ္ ကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့အျပင္ ပိုက္မွာလဲ ေရယိုေစပါတယ္။ အတြင္းမွာလဲ condensation အရည္ေတြခဲသြားျပီး အေအးဓာတ္ ေလ်ာ့က်ေစတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Air Con ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတာပဲ ၀ယ္၀ယ္ ေၾကးပိုက္ စနစ္မွာ ခ်ိဳ ့ယြင္းေနရင္ေတာ့ အလကားျဖစ္သြားမွာပါ။
Brand ေတြရဲ့ ေစ်းနွုန္းကြာျခားသြားရျခင္းပါ။
ဲ့ အဲဒါေျကာင့္ Aircon တပ္္မယ္ဆိုရင္ ့္ ကုန္က်သြားတဲ့လကုန္က်စားရိတ္နဲ့ ထိုက္တန္တဲ့
အရည္အေသြး ရဖို့ က်ြမ္းက်င္တဲ့ သူေတြနဲ့ တိုင္ပင္တပ္ဆင္ သင့္ပါတယ္။
Crd-Y.L.G Engineering Group.
👍 အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီး ေစ်းႏႈန္းေလးမ်ား(17.1.2019)
Customer cash back 5000ks ကို ျပန္လည္ေလ်ာ့ေပးသြားမွာပါဗ်။(ယခုလ 31.1.2019 အထိသာ)
😇 ဟိုေမးဒီေမး ေမးစရာ မလိုေတာ့ပါ
🤑 ကုန္ၾကမယ့္ ေငြပမာဏကို သိခ်င္ေသးလား
1️⃣. Copper pipe (7fts) ၇ေပ
3️⃣. Outdoor frame
5️⃣. Drain pipe
7️⃣. Installation fee
8️⃣. Transportation fee
👉 CHIGO 👈
(M-155)1Hp - 405000ks
(M-155)1.5Hp - 460000ks
(M-156)1Hp - 415000ks
(M-156)1.5Hp - 470000ks
(25A)1Hp - 430000ks
(32A)1.5Hp - 485000ks
(25V)1Hp - 540000ks
(32V)1.5Hp - 620000ks
👉 Chang Hong 👈
(10QB)1Hp - 365000ks
(13QB)1.5Hp - 405000ks
(10QC)1Hp - 390000ks
(13QC)1.5hp - 440000ks
👉 Hisense 👈
(AS09CR4)1Hp - 395000ks
(AS12CR4)1.5Hp - 460000ks
1Hp - 510000ks
1.5Hp - 545000ks
👉 Summit 👈
(SMCZ09F)1Hp - 385000ks
(SMCZ12F)1.5Hp - 445000ks
👉 AUX 👈
(09FMR)1Hp - 395000ks
(12FMR)1.5Hp - 450000ks
(09LIR)1Hp - 480000ks
(12LIR)1.5Hp - 530000ks
👉 HOMAGIC 👈
(HSW)1Hp - 375000ks
(HSW)1.5Hp - 425000ks
👉 Mitsubishi(Mr.Slim) 👈
(GF10)1Hp - 575000ks
(GF13)1.5Hp - 665000ks
(HM10)1Hp - 620000ks
(HM13)1.5Hp - 705000ks
👉 Mitsubishi (Heavy) 👈
(SR-05)0.5Hp - 420000ks
(SR-09)1Hp - 500000ks
(SR-12)1.5Hp - 585000 ks
(ASG09)1Hp - 490000ks
(ASG12)1.5Hp - 610000ks
(09FNTA)1Hp - 520000ks
(12FNTA)1.5Hp - 625000ks
(09J)1Hp - 625000ks
(12J)1.5Hp - 735000ks
👉 Panasonic 👈
(PV9)1Hp - 525000ks
(PV12)1.5hp - 650000ks
(PS9)1Hp - 685000ks
(PS12)1.5Hp - 810000ks
(S10)1Hp - 750000ks
(S13)1.5Hp - 890000ks
👉 Daikin 👈
(FTN 25A)1Hp - 540000ks
(FTN 35A)1.5Hp - 625000ks
(FTK 25A)1Hp - 695000ks
(FTK 35A)1.5Hp - 775000ks
⛔အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေၾကးပိုက္(၇ေပ)ပါဝင္ေသာ ေစ်းႏႈနိ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ေျကးပိုက္(၇ေပ)ထက္ပိုဆြဲရပာက ေၾကးပိုက္ဖိုး တစ္ခုထဲသာ ထပ္မံ၍ေပးေခ်းရပာမည္(Trunking သုံးပါက Trunking ဖိုး)။အျခားမည္သည့္အခေျကးေငြမွ ေပးေခ်စရာမလိုပာ။စက္အမ်ိဳးအစားအားလုံးအတြက္ Company အာမခံ(၃ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၄ႏွစ္) ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပီး Installation အာမခံ (၁ႏွစ္) ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွ အဲကြန္းေစ်းအတက္အက်ေပၚမႈတည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
Air Con oယ်မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့အချက်များ နှင့် အဲကွန်းတပ်ဆင်အပီးအစီးစျေးနှုန်းများ
Air Con oယ်မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ နှင့်
Air Con တစ်လုံးရဲ့အေးနိုင်စွမ်းကို Btu နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
Btu များလာတဲ့အလျောက် သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကလဲလိုက်ပြီး များလာမှာပါ။
အများစု သိထားကြတယ့် horsepower(hp) မြင်းကောင်ရေအား က တကယ်တမ်းတော့ အရေးမပါပါဘူး။
Horsepower (hp) က အအေးနှုန်းကို တိုင်းတဲ့ unit မဟုတ်ပါဘူး ။
Horsepower(hp) ဘယ်နကောင်ရှိတဲ့ Air Con မှာ Btu ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာ Brand အလိုက် Model အလိုက် သတ်မှတ်ပုံ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
မိမိအခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu ကို "အကြမ်းဖျင်း"တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မိမိ သုံးမယ့်အခန်းရဲ့ အလျား x အနံ square feet ကို 35 နဲ့ မြှောက်ပါ။ ရလာတဲ့အဖြေက မိမိ အခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu ပါပဲ။
ဥပမာ 12 ပေx 15 ပေ အခန်းဆိုရင် square feet က 180 ပါ။ 180 x 35 = 6300 Btu လိုအပ်ပါတယ်။
အရိပ်ကျတဲ့အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu ကို 10% နှုတ်ပါ။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့ အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu ကို 10% ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
မီးဖိုချောင်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ရလာတဲ့ Btu ကို 4000 ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
အခန်းထဲမှာ လူ ၁ ယောက်ထပ် ပိုနေမယ်ဆိုရင် အခန်းဧရိယာအတွက် တွက်ထားတဲ့ Btu အပြင် လူတစ်ဦးအတွက်ကို 600 Btu စီ ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
Toshiba ၁ကောင်မှာ 8500Btu ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ 11600Btu ၊၂ကောင်မှာ 16400Btu ၊ ၃ကောင်မှာ 21900Btu အပူဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။
EER ဆိုတာ Btu per hour ကို input Watt(W) နဲ့ စားထားတဲ့ အချိုးပါ။
EER များလာရင် Air Con စျေးလဲ လိုက်များလာပါတယ်။
Inverter type တွေမှာဆို EER 12 ကနေ15 ဝန်းကျင် ရှိကြပါတယ်။
24 နာရီ7ရက်လုံး ဆက်တိုက် အချိန်ကြာကြာ သုံးရမယ့်နေရာမျိုးမှာဆို EER မြင့်တဲ့ Air Con ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
Toshiba ၁ကောင်မှာ10.12 EER ၊ ၁ကောင်ခွဲမှာ 9.35 EER ၊၂ကောင်မှာ 9.11 EER ၊ ၃ကောင်မှာ 10.5 EER ရှိပါတယ်။
အတွင်း unit က ထွက်တဲ့ လေထွက်နှုန်း ကို cubic meter per hour (m³/h) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ လေထွက်နှုန်းများလေ အအေးမြန်လေပါ။
Toshiba ၁ကောင် air con မှာ 540m³/h
Toshiba ၁ကောင်ခွဲ air con မှာ 600m³/h
Toshiba ၂ကောင် air con မှာ 900m³/h
Toshiba ၃ကောင် air con မှာ 1100m³/h ထွက်ရှိပါတယ်။
ဆူညံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ split type မှာဆိုရင် အတွင်း unit နဲ့ အပြင် unit ရဲ့ ဆူညံမှုဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
အတွင်း unit ရဲ့ ပန်ကာက တော်တော်ဆူညံနေတယ်ဆိုရင် သင်ညအိပ်ရင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေမှာပါ။
အပြင် unit ကလည်း ပြတင်းပေါက်နဲ့ နီးပြီး အသံကျယ်နေမယ်ဆိုရင် အတွင်းကပင် ဆူညံသံကို ကြားနေရနိုင်ပါတယ်။
ဆူညံမှုကို decibel (dB) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ dB နည်းလေ အသံတိုးလေပါ။
Air Con မှာ outdoor unit ထဲမှာရော Indoor unit ထဲမှာရော ၂ခုကို ဆက်ပေးထားတဲ့ ပိုက်မှာရော ကြေးနီကို အသုံးပြုရပါတယ်။ တကယ်လို့ သုံးထားတဲ့ ကြေးနီက မစစ်ရင်တော့ Compressor နဲ့ Condensor ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း full quality အအေးကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို ့Air Con တွေမှာ ကြေး (100%) အစား အလူမီနီယမ် (100%) သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် ကြေး နှစ်မျိုး ရောစပ်ပြီး သုံးထားပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းဝယ်စရိတ်မှာ ကြေးက ၂ဆ ပိုကုန်ကျပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြေးက အလူမီနီယမ်ထက် ပွတ်တိုက်စားနှုန်း ပိုခံနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အမြန်နှုန်းမှာလဲ ကြေးက ၂ဆ ပိုမြန်စွာ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။
6. ကြေးပိုက် ဖော့စွပ်
Outdoor နဲ့ Indoor unit ကို ဆက်ပေးတဲ့ ကြေးပိုက်ကို စွပ်တဲ့ ဖော့စွပ်က original စွပ်ပြီးသားမှ အအေးလုံမှာပါ။ ပိုက်သပ်သပ်ဝယ် ဖော့စွပ် သပ်သပ်ဝယ်ပြီး ဖော့စွပ်ကို ထက်ခြမ်းအလျားလိုက် အစဆုံး လှီးပြီးမှ ဖော့စွပ်ထဲ ကြေးပိုက် ထည့်တာက အအေးဓာတ် ကို လျော့ကျစေတဲ့အပြင် ပိုက်မှာလဲ ရေယိုစေပါတယ်။ အတွင်းမှာလဲ condensation အရည်တွေခဲသွားပြီး အအေးဓာတ် လျော့ကျစေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Air Con ဘယ်လောက်ကောင်းတာပဲ ၀ယ်ဝယ် ကြေးပိုက် စနစ်မှာ ချို ့ယွင်းနေရင်တော့ အလကားဖြစ်သွားမှာပါ။
Brand တွေရဲ့ စျေးနှုန်းကွာခြားသွားရခြင်းပါ။
ဲ့ အဲဒါကြောင့် Aircon တပ််မယ်ဆိုရင် ့် ကုန်ကျသွားတဲ့လကုန်ကျစားရိတ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့
အရည်အသွေး ရဖို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်တပ်ဆင် သင့်ပါတယ်။
👍 အဲကွန်းတပ်ဆင်အပီးအစီး စျေးနှုန်းလေးများ(17.1.2019)
Customer cash back 5000ks ကို ပြန်လည်လျော့ပေးသွားမှာပါဗျ။(ယခုလ 31.1.2019 အထိသာ)
😇 ဟိုမေးဒီမေး မေးစရာ မလိုတော့ပါ
🤑 ကုန်ကြမယ့် ငွေပမာဏကို သိချင်သေးလား
1️⃣. Copper pipe (7fts) ရပေ
⛔အထက်ပါ ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများသည် ကြေးပိုက်(၇ပေ)ပါဝင်သော စျေးနှုနိ်းများသာဖြစ်ပါသည်။ကြေးပိုက်(၇ပေ)ထက်ပိုဆွဲရပာက ကြေးပိုက်ဖိုး တစ်ခုထဲသာ ထပ်မံ၍ပေးချေးရပာမည်(Trunking သုံးပါက Trunking ဖိုး)။အခြားမည်သည့်အခကြေးငွေမှ ပေးချေစရာမလိုပာ။စက်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Company အာမခံ(၃နှစ် သို့မဟုတ် ၄နှစ်) ရရှိမည်ဖြစ်ပီး Installation အာမခံ (၁နှစ်) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။အချိန်နှင့်အမျှ အဲကွန်းစျေးအတက်အကျပေါ်မှုတည် စျေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီးေစ်းႏႈန္းမ်ား Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:16 PM Rating:5Air Con oယ္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဲကြန္းတပ္ဆင္အပီးအစီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား(17.1.2019) 1.British Thermal Unit (Btu) Air Con ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 7:16 PM